Building Ihe Machinery
Block Ime Machine
Terrazzo Ngidi Machine
Ụlọ Ngidi akpụ Machines
Ndị ọzọ na-ewu ihe owuwu Machinery
Ekpofu Nyefee Station
Ndị ọzọ na-Environmental Machinery
Qunfeng Intelligent Machinery Co., Ltd. e webatara na 1995 na-agba mbọ ka ndị nnyocha, mmepe, rụpụta, nkesa na ọrụ nke ewu ihe owuwu igwe dị ka ihe mgbochi Ndinam akara, AAC ngọngọ mmepụta akara na-ewu ụlọ n'efu ọgwụgwọ ígwè. Na ihe karịrị afọ 20 nke na-aga n'ihu ime na-agbalịsi izu okè na mmepe na mmepụta, anyị ụlọ ọrụ na-enye zuru ụwa ọnụ na-ewu ụlọ ọrụ na owuwu ntọala maka ha ka mma isi competitiveness site n'ụzọ zuru okè combing ozizi "nwere ọgụgụ isi technology" na ozizi nke "elu arụmọrụ na gburugburu ebe obibi enyi na enyi ".
Anyị na-iri-akwalite obodo mmepe na-ọgụgụ isi technology. Dị ka anyị isi repsonsibility / Anyị technical R & D taskforce mejupụtara banyere 100 ọkachamara na ubi ndị dị otú ahụ dị ka n'ibu, haịdrọlik, electronic na ewu ihe owuwu. Anyị melite abụọ nnyocha oru na ike a ọma usoro mmekorita ya na kasị ama Chinese mahadum na nnyocha oru. Anyị keere òkè na drafting na rectification nke ihe karịrị iri na abụọ mba na ulo oru ụkpụrụ na ngwaahịa. Anyị meriri karịrị 200 Ikike nchọpụta Kemịkalụ maka mepụtara, na ịba uru na imewe nakwa dị ka atọ n'ógbè technical nweta appraisals.
The ụwa manfacturing System
Na ngụkọta ego nke 45 nde RMB, Qunfeng iru 'Fujian Qunfeng Machinery Co., Ltd.' na 'Qunfeng Industrial Park' na Nan'an Binjiang ngwá n'ichepụta isi ke 2008, nke malitere a ohuru nwere ọgụgụ isi oge. The ulo oru park enyene a ngụkọta nke 215.000 square mita na n'ozuzu n'ala ebe ichekwa na 145.000 square mita. N'iji ya ike ego ike, Qunfeng ka ẹkenam dị iche iche iche iche nke anụ ụlọ na esenidụt elu nhazi akụrụngwa gụnyere CNC nhazi center, ịgbado ọkụ robot, zuru-akpaghị aka okpomọkụ omume ngwá, laser ọnwụ igwe na CNC plasma oku-ihe-ubi igwe. Na mgbe nile ọhụrụ, imekọ ihe ọnụ na n'elu mba suppliers, na mwekota nke zuru ụwa ọnụ, elu-edu ego, Qunfeng aghọwo ihe nwere ọgụgụ isi, na nkà na ụzụ na eco-enyi na enyi ọsụ ụzọ na ubi nke China ewu ihe owuwu ígwè ubi na ya ikenyeneke mbiet na elu ngwaahịa imewe, ike na ike ngwaahịa mma nakwa dị ka raara onwe ya nye na ezi obi ọrụ.
Global ọrụ usoro
Dị ka a nlereanya enterprise of China ewu ihe owuwu ígwè, Qunfeng enye upscale na elu-àgwà ígwè na ọgụgụ isi technology maka ndị ahịa ha. Ekpuchi isii kọntinent na 7 esenidụt ọrụ ụgbọ na 24 anụ ụlọ ọrụ, Qunfeng jeworo ozi 8000 ahịa si 110 mba na mpaghara na rụọ ọrụ nke ọma nwere ọgụgụ isi n'ichepụta ngwá. Qunfeng emeela oké aha na ụwa na ya na ngwaahịa a na-exported ka elu-larịị ahịa n'ụwa nile, gụnyere Asia, Europe, South America, Oceania, Africa na North America.
Ukpono na Awards
N'oge ihe karịrị 20 afọ nnyocha sayensị na ịmụta n'ihu, Qunfeng mgbe niile na-eme a siri ike echiche nke-elekọta mmadụ ọrụ na natara elu otuto na nkwado si ọchịchị na otu na ya mmụọ nke "Iguzosi ike n'ezi, Innovation, arụmọrụ na Cooperation". Qunfeng enweela dị iche iche nke certifications gụnyere àgwà management usoro, gburugburu ebe obibi management usoro, OHSMS, IPMS, nchekwa mmepụta Standardization management na mba na ngwá agha na akụrụngwa quality management. Qunfeng meriwo nza nke kwuo, ndị dị ka "National ọwa Program Key High-tech Enterprise", "National ọgụgụ isi Pilot Unit", "Provincial Ezigbo na Innovative Enterprise", "Engineering Technology Research Center nke Ógbè Concrete Building Materials akpụ Enterprises", "Provincial Famous Trademark", "Provincial Famous Brand Products", "Provincial maara nke ọma Enterprise", "Provincial International Famous Brand", "Provincial ahịa-afọ ojuju Product" na "a na-Informatization Integrated Model Enterprise".
Na ukpono na-atụ anya, Qunfeng ga-anọgide na-esi ọnwụ na isi uru nke na-eke ga-eme n'ọdịnihu na-Intelligence na Innovation, imezu oké ozi nke-ewu ebe obibi obodo amamihe na iwu gburugburu ebe obibi-enyi na enyi otu technologically.